Nzira dzekudyara: maitiro ekuishandisa? | Ehupfumi Zvemari
Sezvaunoshandisa dzimwe nzira dzekudyara, zvinogara zviri nyore kwauri kuti ushandise zvakanyanya mari yako nenzira kwayo chaiyo. Kunyanya, nekuti iwe uri kunamatira kune akateedzana eparameter ayo ane chinangwa chekuzadzisa iyo akateedzera magumo kubva pakutanga. Mupfungwa iyi, unogona kuwana akawanda nzira dzekudyara ma profiles seanodyara anogona kukura. Hazvina kufanana, zano remunhu anochengetedza saver pane iro rine hukasha. Hazvishamisi kuti iyo nzira ichave yakanyanya kusiyana mune yega kesi, sezvo iwe uchizokwanisa kuona pazasi.
Kutanga zano rekudyara zvichave zvakakosha kutanga pane zvese kuti iwe ugadzire zvishoma zvinangwa. Nekuti zvinoenderana navo, unogona kusarudza imwe kana imwe yemari midziyo, kunyangwe mukati memusika mumwe chete wezvemari. Ikoko kunenge kwakakosha kwazvo izvo tsanangura mazwi ekugara kwaunoda kuenda. Nekuti zviwanikwa zvakagadzirirwa kwenguva pfupi zvichasiyana zvakanyanya, pamwe nepakati nepakati. Iwe haugone kukanganwa kuti ivo vachazoda kurapwa kwakasiyana kubva pakutanga. Hazvishamise kuti imwe yemakiyi ekudyara kwakanaka chikamu chayo chekugadzirisa.
Mune chero zano rekudyara rakakosha munyu, zvichave zvakafanira kuti utarise kune iyo capital yakadyarwa. Kana ikakwenenzverwa pasi pemari yakadzikama kwazvo kana kupesana iwe unofunga kupa yakawanda kupfuura inoenderana neyako pachako kana yemhuri nhaka. Mune imwe neimwe nyaya, zvinoda maitiro ehunhu ayo anozosiyana, kwete mumafomu chete asiwo mune chimwe chinhu chakakosha, chinova chiri zvirimo. Neichi chikonzero chaicho hazvigone kutaurwa kuti kune zano rimwe chete kudyara, asi zvinopesana pane zvakawanda uye zvakasiyana muhunhu. Ivo vanozoenderana neiyo chimiro chevadiki nepakati varimi: vanozvidzivirira, vepakati kana vane hukasha.
1 Isu rekudyara: tsananguro
2 Ndezvipi zvinonyanya kukosha?
3 Mutemo wekugovera uye wekuda
4 Maitiro ane masheya pamusika wekutengesa
5 Unogona here kugadzirisa zano?
6 Tsvaga yakanakira purofiti
Isu rekudyara: tsananguro
Asi chekutanga pane zvese, iwe uchafanirwa kutarisisa kune zvarinoreva chaicho, kuitira kuti nenzira iyi iwe uri muchinzvimbo chekuchishandisa zvakanyatsojeka. Zvakanaka, patinotaura nezve nzira yekudyara isu hatisi kureva a seti yemitemo, maitiro uye maitiro, yakagadzirirwa kutungamira muzvinashawo mukusarudza portfolio yekuchengetedzeka. Nekuda kweizvozvo, iwe unowana ako masimendi kuti ave akarongwa zvirinani kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti zvinoda kurairwa kuti uite mamwe eaya masisitimu kusimudzira zvinhu zvako nenzira inoshanda.
Kubva pane ino mamiriro ese, chero zano rekudyara rinoshanda rinotarisa kuchengetedza, pasina kutsauswa ne epfupi-kwenguva zviwanikwa zvemari. Asi uine hunhu hunotsanangurwa chaizvo uye hwaunofanirwa kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda uye izvo ndizvo zvaunofanirwa kuchengetedza kurangwa kusvikira wazadzisa zvinangwa zvako zvakakosha. Izvi mukuita zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve unowirirana kupfuura usati waita chikumbiro chako. Nguva dzose zvichibva pane zvako chaicho zvaunoda uyezve kubva pane zvaunoshuvira sediki uye wepakati investor.
Ndezvipi zvinonyanya kukosha?
Maitiro akanaka ekudyara anenge asina kukwana kana iwe ukazvibvunza iwe uyu mubvunzo wakakodzera. Kwete pasina, ndiye achapa mhinduro kune zvaunonetsekana sewe investor uye kubva kwakasiyana maonero. Nekuti mukuita, inogona kutungamirwa kune zvakasiyana zvigadzirwa kana mari yemari. Semuenzaniso, inotarisisa pamabhangi ekuisa mari, kutsvaga kudzoserwa kwakavimbiswa kana kunyangwe kubva kumamodeli ekudyara anonzi mamwe Nekuti kunongedza zvinhu kana misika yesimbi yakakosha inosanganisirwa mune izvo zvinowanzonzi nzira dzekudyara. Kunyangwe iine hunhu uye, pamusoro pezvose, nzira dzakasiyaniswa zvine chekuita nemamwe marudzi eakawanda echinyakare kana akajairwa mari.
Kubva pane ino maonero ekudyara, hauzove nesarudzo kunze kwekutsanangura madire aunoda kuti zviwanikwa zvako zvive kubva panguva chaidzo idzi. Zvekuti zvigone kuendeswa nenzira kwayo uye iwe ugone kusvika sangana nezvinangwa zvako zvepamusoro. Iko, muzviitiko zvakawanda, marongero akanakisa anofanirwa kuve akareba kwenguva yakareba, kune kusiyaniswa kwemhuri, asi ivo vanofanirwa kukanganwa nezvekudzivirirwa kwakanaka kwemipiro yako yemari. Nekuti iwe haufanire kukanganwa kuti kuchengetedza iyo mari yakasimwa zvakare iri zano rekudyara. Kunyanya kana zviitiko zvemisika yezvemari zvisina kunyatsodikanwa.
Izvo zvakakosha kuti iwe uzive mupfungwa kuti marongero ekudyara anogona kuchinja zvakanyanya zvichienderana nechipo yakakwira kana yakaderera yemabhengi uye echinyakare zvigadzirwa. Ndokunge, zvichienderana nekuti mitengo yemidziyo yemari inonzwisisika kutenga here kana kuti kwete. Hazvishamisi kuti kusiyanisa uku kunogona kutungamira mukuvandudzwa kwenzira dzekudyara dzakadai sedzemusika wemasheya kana mamwe misika yemari ine hukasha. Nepo mune dzimwe nguva, zvichave zvakafanira kuenda kumisika yakajairika. Ku, semuenzaniso, kondirakiti yemabhangi akachengetedzwa, zvinyorwa zvevimbiso kana zvigadzirwa zvine maitiro akafanana.
Kudzoka pane kudyara mari chichava chimwe chinangwa chakakosha mune chero zano rekudyara. Kune izvi hakuzove nesarudzo kunze kwekuongorora zvigadzirwa uye mamiriro chaiwo emisika yemari. Kuti utarise kuti ndeupi wavo akakukodzera pane imwe nguva. Nekuti zvirizvo, chimwe chikamu chekuongorora ndechekuti imwe kana chimwe chigadzirwa chemari chichagara chichikurudzirwa. Zvinoenderana nezvakawanda zvinhu uye chimwe chezvakanyanya kukosha ndicho icho icho ine chekuita nenguva yekudyara. Nekuti ikozvino zvinogona kuve kutenga uye kutengeswa kwemasheya mumusika wemasheya uye mazuva anotevera sarudzo inonzwisisika ndeyekudyara mune zvakakosha simbi.
Maitiro ane masheya pamusika wekutengesa
Zvichienderana nemafungiro akajairwa, urwu rudzi rwehurongwa hwekudyara hunofanirwa kutungamirwa nezvinangwa zviviri zvakakosha. Kune rimwe divi, simudzira kubatsirwa kwezvimwe zvigadzirwa zvemari uye kune rimwe divi, chengetedza zvipo zvemari pasi peyakanakisa sisitimu. Hazvishamise kuti kubudirira chaiko kwekushanda kunoenderana nekushandisa chaiko kwemaitiro ese uye pane chero zano rekudyara rinofanira kutariswa. Paunowedzera kuronga, zvirinani zvichazove zvako uye zvemhuri zvaunofarira, sezvo iwe uchizokwanisa kuziva kuburikidza nezviitiko zvako munguva yakapfuura.
Kune rimwe divi, kuve neunyanzvi hwekudyara nzira kunokutendera iwe kuti usvike kune zvakarongwa zvinangwa. Kusvika padanho rekusvika padhuze nekugadzira iyo zvirinani zvinodzoka kubva pakutanga. Chero hupfumi hwacho semudyari mudiki nepakati uyo iwe waunopa mune yega nhanho yehupenyu hwako. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Hazvishamisi kuti iyi ndeimwe yekiyi kune yakanaka nzira yekudyara. Nekuti pane zvekare zvakawanda zvaunogona kuvimba nazvo kubva panguva chaidzo idzi.
Unogona here kugadzirisa zano?
Imwe musiyano yaunoda kuziva kubva zvino zvichienda ndeyekuti nzira dzekudyara hazvizungunuke. Hongu kwete, uye chero nguva uye mamiriro ezvinhu iwe unogona kuchinja maitiro ako mumisika yemari. Kunyangwe pasina kushandisa zvisizvo iyi sisitimu nekuti inogona kutungamira kune asingadiwe mamiriro ekudzivirira ako aunoda zvakanyanya zvido. Nekuti mune ino pfungwa haugone kukanganwa kuti zviri nyore sei kuti aya marongero anoongororwa imwe neimwe nguva yenguva. Makore maviri kana matatu kutungamira.
Kune rimwe divi, zano diki remhando yerudzi urwu ndeyekuongorora zvinangwa paunoona kuti tarisiro yemari haina kuzadzikiswa. Asi kunyanya kana nzira idzi havawani mhedzisiro. Kwete zvisina maturo, ichave inguva yakakosha zvikuru mairi pazvinenge zvichikosha kuisa zviitiko zvakarongwa. Chero zvazvingaitika, kana usina chokwadi kana usingazive zviri kuitika, haisiyo mhinduro yakanaka yekushandura marongero ako ekudyara. Nekuti mhedzisiro yacho inogona kukuvadza zvakanyanya zvaunofarira.
Tsvaga yakanakira purofiti
Kubva pane ino mamiriro, ako ese marongero anofanira kuenda kuburikidza kuyedza kuzadzisa yakawanda inogoneka purofiti. Asi uchiremekedza nguva dzese, iyo yekubatana nguva yemisika yemari, inozopedzisira iri iyo ichaita shanduko yekushomeka kwako kwekudyara portfolio. Chero zano raunoshandisa mune yega mamiriro ezvinhu ayo misika yemari iripo. Saka kuti nenzira iyi, maitiro eako ekudyara portfolio ari yakakwira kupfuura iyo chaiyo inogadzwa nemamiriro ehupfumi. Ehezve, iyi ndiyo kiyi yekushandisa yakanakisa nzira yekudyara. Pamusoro pemamwe masisitimu asina chinangwa uye mune iro purofiti isingakunde kupfuura zvimwe zvese.
Neiyi tsananguro iwe unenge wanzwisisa zvishoma zvirinani mamiriro echinyorwa chino. Kusvika padanho rekuti iwe unokwanisa kuzviisa mukuita kuvandudza mabhenefiti emari dzako kubva nhasi zvichienda mberi. Ndozvazviri nezvazvo uye zvichave zvisina kunetsekana kuti iwe uzviite kuburikidza nekushomeka kwesimba uyezve nerombo rakanaka. Nekuti haugone kukanganwa kuti tiri kutaura nezvemari. Uye aya ndiwo akakosha hunhu kuti ubatanidzwe neimwe budiriro nekirasi iyi yemari yemari. Iwe unoda here kutevedzera aya matipi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nzira dzekudyara: maitiro ekuishandisa?